Hoos udhaca doolarka ee suuqyada Puntland oo saamayn ku yeelatay ganacsiga & nolosha dadwaynaha; dawladda oo sheegtay in lasoo daabacayo lacago cusub. – Radio Daljir
Hoos udhaca doolarka ee suuqyada Puntland oo saamayn ku yeelatay ganacsiga & nolosha dadwaynaha; dawladda oo sheegtay in lasoo daabacayo lacago cusub.
Maarso 8, 2012 12:00 b 0
Garowe, Mar 8 -Suuqyada ganacsiga ee deegaanada Puntland ayaa siweyn looga dareemay hoos u dhac balaaran oo ku yimid qiimaha lagu sarifto lacagta Mareykanka
Qiimaha 100-ka doolar lagu sarrifo ayaa ka gaaray suuqayada Puntland 1900000 sh.so (halmayan iyo sagaal boqol oo kun ) halka markii hore uu ka ahaa 3000000 sadex milyan sh.so.
Marka laga yimaado hoos u dhaca qiimaha doolarka ayaa waxaa suuqyada laga dareemay inay qiimaha macaashiddu aysan ku imaan wax isbdel ah.
Ganacstada waawayn ee magaalada Boosaaso ayaa diiday inay dadwayanaha ay wax kaga gataan lacagaha doolarka oo uu hoos u dhac ku yimid.
Wasiirka maaliyadda Puntland Faarax Cali Shire oo shir jara’id ku qabtay caasimadda Puntland ee Garoowe,ayaa waxaa uu tilmaamay hoos u dhaca qiimaha doolarka inuu yimid kadib markii ay badatay adeegsiga doolarka iyo lacagta doolarka oo ka imaanaysa beesha caalamka oo soo galaysa suuqayada Puntland iyo koonfurta Soomaaliya.
Wasiirkam, ayaa sidoo kale sheegay inay socoto qorshe lagu dabaacayo lacago cusub oo sh.so ah kaasi oo ay hormuud ka tahay dowladda faderaalka KMG ah ee Soomaaliya.
Md. Faarax Cali Shire ayaa tilmaamay dowladda Puntland inay qaadayso tallaabooyin hoos loogu dhigayo dhibaatooyinka ku yimid hoos u dhaca doolarka iyo qiimaha cunadda,isagoona tilmaamay dadwaynaha in looga baahanyahay inay xisaab ka furtaan bankiga dhexe ee dowladda si lacagahooda loogu badalo lacagta cusub ee lasoo daabici doono.
Si kastaba,hoos u dhaca ku yimid qiimaha doolarka ee suuqyada Puntland ayaa waxaa saamayn xoogan ku yeelatay nolosha dadka danyarta ee ku nool gudaha Puntland iyo dadka kalle lacagaha looga sii dirro dalka dibadiisa.
Ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab oo ku dagaalamay J/Hoose
4 qof oo ku dhaawacmay dibad-bax maanta ka dhacay magaalada Laascaanood, Sool.